Candidates3 – NLD Yangon
Name(အမည်) – ဦးအောင်မင်းမင်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 02 Jun 1974 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.Sc(Physics) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – နိုင်ငံရေး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ကံကြီး/မကျီး Constituency__name_English – Kungyangun State or Region Hluttaw Constituency(2) Constituency__name – ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) […]
Name(အမည်) – ဦးအောင်မြတ်ကျော် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 27 Jul 1958 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.A(philosophy) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – စာပေလောကစာအုပ်တိုက်နှင့် ပုံနှိပ်တိုက် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Bahan State or Region Hluttaw Constituency(1) Constituency__name – ဗဟန်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) Constituency__parent – […]
Name(အမည်) – ဦးအောင်နိုင်ထွန်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 06 Jul 1970 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – အလွတ်သင်ကျူရှင်ဆရာ Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မြို့ဟောင်းအရှေ့ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Thanlyin State or Region Hluttaw Constituency(2) Constituency__name – သံလျှင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) […]
Name(အမည်) – ဦးမြင့်လွင် Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 08 Mar 1968 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.A၊ H.G.P၊ D.R.L၊ D.T.I၊ D.M.L၊ D.I.R၊ DAPsy၊ Dip in Global English Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – နိုင်ငံရေး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ၂/ရပ်ကွက်၊ မ/ဥက္ကလာပ Constituency__name_English […]
Name(အမည်) – ဦးနိုင်ဇော်လင်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 01 Sep 1988 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- ဒဿ နိကဗေဒ (ဝိဇ္ဇာဘွဲ့) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ၂၉ ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Constituency__name – ဒဂုံမြို့သစ် Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး […]
Name(အမည်) – ဦးခင်ဝင်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 02 Sep 1956 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- A.G.T.I Second Year Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြိုင်မြို့ Constituency__name_English – Kyimyindaing State or Region Hluttaw Constituency(2) Constituency__name – ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) Constituency__parent […]
Name(အမည်) – ဦးခင်မောင်ဝင်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sun, 02 Nov 1947 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.Sc၊ HGP၊ RL Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် Constituency__name_English – Constituency__name – လမ်းမတော်မဲဆန္ဒနယ် Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး […]
Name(အမည်) – ဦးစိုးသူရထွန်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 12 May 1970 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – မဟာသိပ္ပံ(ဘူမိဗေဒ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဒု-ဥက္ကဌ၊မြန်မာနိုင်ငံမြေငလျင်ကော်မတီ Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အလယ်ရွှေဂုံတိုင် constituency__name_English – Kungyangun Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name – ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် constituency__parent – […]
Name (အမည်) – ဦးတင်ထွန်းနိုင် Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Fri, 29 Jan 1971 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.E(Electronics) eMBA Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Seikkyi Kanaungto State or Region Hluttaw […]
Name(အမည်) – ဦးတင်ရှိန် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 07 Sep 1951 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- နဝမတန်း Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးနှင့်လယ်လုပ်ငန်း Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မင်္ဂလာရပ်ကွက် Constituency__name_English – Tite kyee Constituency Constituency__name – တိုက်ကြီးမဲဆန္ဒနယ် Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mother Name (အမိ […]
Name(အမည်) – ဦးတင်ဝင်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 20 Oct 1967 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.A (History) RL.II Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ကြိုပို့ယာဉ်လုပ်ငန်း Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ် (၃)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Kamayut State or Region Hluttaw Constituency(1) Constituency__name – ကမာရွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) […]
Name (အမည်) – ဦးတင်မောင်ဝင်း Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sat, 02 Aug 1947 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.E(Mech)၊ D.M.A၊ Dip Ind. Ext.(Netherlands) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ကထိက(ငြိမ်း) Ethnicity (လူမျိုး) – မြန်မာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ကျောက်တန်းအရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက် Constituency__name_English – Seikkan Pyithu Hluttaw Constituency Constituency__name […]
Name (အမည်) – ဦးထွန်းမြင့် Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sat, 09 Mar 1968 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.Sc(Physics) University of Yangon Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်(LBO) Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက် Constituency_Name_English – Bahan Pyithu […]
Name(အမည်) – ဦးဘမျိုးသိန်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 05 Aug 1954 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- အမျိုးသားလွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.Ag (1980) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ် Constituency__name_English – Amyotha Hluttaw Constituency No (4) Constituency__name – အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) […]
Name (အမည်) – ဦးဘိုဘိုဦး Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Wed, 03 Feb 1965 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – နောက်ဆုံးနှစ်(အင်္ဂလိပ်စာအဓိက) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပန်းချီကား အရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ဆရာစံ မြောက်/အနောက်(ဗဟန်း) Constituency_Name_English – Sanchaung Pyithu Hluttaw Constituency Constituency_Name […]
Name(အမည်) – ဦးရန်ရှင်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 14 Aug 1963 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – Managing Director၊ United Winners International Co.၊Ltd Ethnicity (လူမျိုး) – ကရင်-ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၆) ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Mayangon State or Region Hluttaw […]
Name(အမည်) – ဦးရန်အောင်မင်း(ခ)ဂေးမောင် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 27 Sep 1970 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.A(Geo;) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးနှင့်လယ်လုပ်ငန်း Ethnicity (လူမျိုး) – ချင်း Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အုတ်ဖို Constituency__name_English – Shwe pyi thar Constituency Constituency__name – ရွှေပြည်သာမဲဆန္ဒနယ Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mother Name […]
Name (အမည်) – ဦးရဲလွင် Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sat, 21 Oct 1972 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.A(Myanmar) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ရတနာအရောင်းအဝယ် Ethnicity (လူမျိုး) – မြန်မာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ၈/ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာ Constituency_Name_English – Alon Pyithu Hluttaw Constituency Constituency_Name – […]
Name(အမည်) – ဦးရဲမြင့်စိုး Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 08 Dec 1948 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- အမျိုးသားလွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.E (Civil) ဘီအီး(မြို့ ပြ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး(ပြည်နယ်မှူး)(ငြိမ်း)၊ချင်းပြည်နယ်၊ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန Ethnicity (လူမျိုး) – မြန်မာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မြို့ဟောင်းအလယ်ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Amyotha Hluttaw Constituency No (7) Constituency__name – အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇) […]
Name(အမည်) – ဦးလင်းနိုင်မြင့် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 28 Sep 1973 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- LLB၊MBL၊DBL၊DML၊DIL၊DIR၊DGI Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၁)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Kamayut State or Region Hluttaw Constituency(2) Constituency__name – ကမာရွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး […]